အသက် (၂၀) ဝန်းကျင်မှာ အမျိုးသမီးတိုင်းလိုလိုလုပ်မိတတ်တဲ့ ဖက်ရှင်အမှား (၇) ခု -
အသက် (၂၀) ဝန်းကျင်မှာ အမျိုးသမီးတိုင်းလိုလိုလုပ်မိတတ်တဲ့ ဖက်ရှင်အမှား (၇) ခု
Posted on March 15, 2019 March 15, 2019 Author Mya Thitty	Comment(0)
တိုက်ဆိုင်လွန်းအားကြီးလို့ ထိရှနေပါပြီနော် 🤕 🤕
ယောင်းရေ…အသက် (၂၀) ဝန်းကျင်အရွယ်ဆိုတာ မနူးမနပ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကို ကျော်လွန်စပြုပြီး ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်မတိုင်မီ စပ်ကူးမတ်ကူးအရွယ်ပေါ့။ ဒီအသက်အရွယ်မှာ ဆယ်ကျော်သက်တုန်းကလိုလည်း မဝတ်ချင် ကိုယ့်အသက်ထက်ပိုရင့်ပုံပေါက်တဲ့ အဝတ်အစားတွေကိုလည်း မဝတ်ချင်သေးတဲ့အခါ အတော်တိုင်ပတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်ဝယ်ရင်းနဲ့ ဒီလိုဖက်ရှင်အမှားတွေကို လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်နော်။
(၁) အင်္ကျီတစ်ထည်ကို နှစ်ခါပြန်မဝတ်တာ
သူများတွေက ဒီအင်္ကျီတစ်ထည်တည်းကိုပဲ ခဏခဏဝတ်နေတယ်ပြောမှာစိုးလို့ ယောင်းမှာရှိတဲ့အင်္ကျီအကောင်းတွေကို ချောင်ထိုးမထားပါနဲ့။
(၂) ဈေးပေါတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်နေပြီးမှ ကောင်းကောင်းကန်းကန်းတစ်ထည်မှ မရှိဘူးလို့ညည်းတာ
ဈေးပေါတဲ့အထည်တွေ ဝယ်မယ့်အစား အဲ့ပိုက်ဆံကို စုထားရင် အလယ်အလတ်ဘရန်းဒ်အင်္ကျီကောင်းကောင်းတစ်ထည်ဝယ်လို့ရပါတယ်။
(၃) သူများတွေက ကိုယ်နဲ့မလိုက်ဘူးဆိုလို့ မဝတ်တာ
ယောင်းက ပိန်လို့ဝလို့ ဒီလိုပုံစံနဲ့မလိုက်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ်ကြိုက်ရင် ဝယ်ပါ ဝတ်ပါ။ သူများတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အရေးမပါပါဘူး။
Related article >>> ကမ်းခြေမှာ အပန်းဖြေရင်း လန်းနေဖို့ဆိုရင်
(၄) သက်တောင့်သက်သာမရှိတဲ့ ဖိနပ်တွေဝယ်တာ
ကိုယ်နဲ့မတော်လို့ စီးရတာသက်တောင့်သက်သာမဖြစ်တဲ့ ဖိနပ်တွေကို လှတာတစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဝယ်ပါနဲ့။
(၅) တံဆိပ်ကြောင့် ပိုက်ဆံကို ဘုံးပေါလအောသုံးတာ
ပစ္စည်းအရည်အသွေးကို မကြည့်ဘဲ နာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာဘရန်းဒ်ဖြစ်တာနဲ့ ပိုက်ဆံတွေပုံအောပေးပြီး ဝယ်တာမျိုးကို ရှောင်ပါ။
Related article >>> ဒေါက်ဖိနပ်လှလှလေးတွေရဲ့ အမျိုးအစားတွေကို ခွဲခြားသိစေဖို့
တစ်ချို့ယောင်းတွေက ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ အဝတ်အစားအသစ်တွေ ဝယ်လိုက်ကြတတ်ပါတယ်။ Stella ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုလုပ်ခဲ့ဖူးတာ ဝန်ခံပါတယ်။ ဒီလိုဝယ်မိတဲ့အခါ ယောင်းဆီမှာ မဝတ်ဖြစ်တဲ့အဝတ်အစားတွေ ပုံလာသလို ဘက်ဂျက်လည်းထိခိုက်ပါတယ်နော်။
(၇) Trend နောက်ကိုလိုက်လွန်းတာ
Trend နောက်လိုက်တာ အပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့ အလိုက်လွန်ပြီး အသစ်ထွက်သမျှဝယ်နေရင်တော့ ဝယ်လွန်းမိ အပြစ်ရှိပါနော်။ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းဆိုတာ ဒီနေရာမှာပဲ အမြဲရပ်နေတတ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်လေတော့ ယောင်းဝယ်လိုက်တဲ့ အင်္ကျီအဝတ်အစားတွေက ခေတ်မစားတော့တဲ့အခါ သက်သက်မဲ့ပိုက်ဆံကုန်တာပဲ အဖတ်တင်မှာမို့ ယောင်းနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်တစ်ခုထားပြီး အဲ့အတိုင်းပဲဝတ်သင့်ပါတယ်။
Related article >>> လေးထောင့်ကျကျလည်ပင်းပုံစံတွေကို သူတို့တွေ ဘယ်လို ဝတ်ထားကြလဲ?
ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း ကိုယ်တိုင်လုပ်မိနေတဲ့ ဖက်ရှင်အမှားတွေကို မြင်ကြလောက်ပြီပေါ့နော်။ Stella ကတော့ ပြင်နေဆဲပါပဲ။ ယောင်းတို့လည်း အချိန်မီပြင်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်…
တိုကျဆိုငျလှနျးအားကွီးလို့ ထိရှနပေါပွီနျော 🤕🤕
ယောငျးရေ…အသကျ (၂၀) ဝနျးကငျြအရှယျဆိုတာ မနူးမနပျဆယျကြျောသကျအရှယျကို ကြျောလှနျစပွုပွီး ရငျ့ကကျြတဲ့အရှယျမတိုငျမီ စပျကူးမတျကူးအရှယျပေါ့။ ဒီအသကျအရှယျမှာ ဆယျကြျောသကျတုနျးကလိုလညျး မဝတျခငျြ ကိုယျ့အသကျထကျပိုရငျ့ပုံပေါကျတဲ့ အဝတျအစားတှကေိုလညျး မဝတျခငျြသေးတဲ့အခါ အတျောတိုငျပတျပါတယျ။ အဲ့ဒီအခါမှာ ဟိုစပျစပျဒီစပျစပျဝယျရငျးနဲ့ ဒီလိုဖကျရှငျအမှားတှကေို လုပျမိတတျကွပါတယျနျော။
(၁) အင်ျကြီတဈထညျကို နှဈခါပွနျမဝတျတာ
သူမြားတှကေ ဒီအင်ျကြီတဈထညျတညျးကိုပဲ ခဏခဏဝတျနတေယျပွောမှာစိုးလို့ ယောငျးမှာရှိတဲ့အင်ျကြီအကောငျးတှကေို ခြောငျထိုးမထားပါနဲ့။
(၂) ဈေးပေါတဲ့ပစ်စညျးတှအေမြားကွီးဝယျနပွေီးမှ ကောငျးကောငျးကနျးကနျးတဈထညျမှ မရှိဘူးလို့ညညျးတာ
ဈေးပေါတဲ့အထညျတှေ ဝယျမယျ့အစား အဲ့ပိုကျဆံကို စုထားရငျ အလယျအလတျဘရနျးဒျအင်ျကြီကောငျးကောငျးတဈထညျဝယျလို့ရပါတယျ။
(၃) သူမြားတှကေ ကိုယျနဲ့မလိုကျဘူးဆိုလို့
မဝတျတာယောငျးက ပိနျလို့ဝလို့ ဒီလိုပုံစံနဲ့မလိုကျဘူးလို့ပွောတဲ့အခါ ဂရုမစိုကျပါနဲ့။ ကိုယျကွိုကျရငျ ဝယျပါ ဝတျပါ။ သူမြားတှရေဲ့ဆုံးဖွတျခကျြတှကေ အရေးမပါပါဘူး။
Related article >>> ကမျးခွမှော အပနျးဖွရေငျး လနျးနဖေို့ဆိုရငျ
(၄) သကျတောငျ့သကျသာမရှိတဲ့ ဖိနပျတှဝေယျတာ
ကိုယျနဲ့မတျောလို့ စီးရတာသကျတောငျ့သကျသာမဖွဈတဲ့ ဖိနပျတှကေို လှတာတဈခုတညျးကွောငျ့တော့ မဝယျပါနဲ့။
(၅) တံဆိပျကွောငျ့ ပိုကျဆံကို ဘုံးပေါလအောသုံးတာ
ပစ်စညျးအရညျအသှေးကို မကွညျ့ဘဲ နာမညျကွီးဒီဇိုငျနာဘရနျးဒျဖွဈတာနဲ့ ပိုကျဆံတှပေုံအောပေးပွီး ဝယျတာမြိုးကို ရှောငျပါ။
Related article >>> ဒေါကျဖိနပျလှလှလေးတှရေဲ့ အမြိုးအစားတှကေို ခှဲခွားသိစဖေို့
တဈခြို့ယောငျးတှကေ ပငျြးပငျြးရှိတာနဲ့ အဝတျအစားအသဈတှေ ဝယျလိုကျကွတတျပါတယျ။ Stella ကိုယျတိုငျလညျး ဒီလိုလုပျခဲ့ဖူးတာ ဝနျခံပါတယျ။ ဒီလိုဝယျမိတဲ့အခါ ယောငျးဆီမှာ မဝတျဖွဈတဲ့အဝတျအစားတှေ ပုံလာသလို ဘကျဂကျြလညျးထိခိုကျပါတယျနျော။
(၇) Trend နောကျကိုလိုကျလှနျးတာ
Trend နောကျလိုကျတာ အပွဈမဟုတျပမေဲ့ အလိုကျလှနျပွီး အသဈထှကျသမြှဝယျနရေငျတော့ ဝယျလှနျးမိ အပွဈရှိပါနျော။ ဖကျရှငျရစေီးကွောငျးဆိုတာ ဒီနရောမှာပဲ အမွဲရပျနတေတျတဲ့အမြိုးမဟုတျလတေော့ ယောငျးဝယျလိုကျတဲ့ အင်ျကြီအဝတျအစားတှကေ ခတျေမစားတော့တဲ့အခါ သကျသကျမဲ့ပိုကျဆံကုနျတာပဲ အဖတျတငျမှာမို့ ယောငျးနဲ့လိုကျဖကျမယျ့ ကိုယျပိုငျစတိုငျလျတဈခုထားပွီး အဲ့အတိုငျးပဲဝတျသငျ့ပါတယျ။
Related article >>> လေးထောငျ့ကကြလြညျပငျးပုံစံတှကေို သူတို့တှေ ဘယျလို ဝတျထားကွလဲ?
ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး ကိုယျတိုငျလုပျမိနတေဲ့ ဖကျရှငျအမှားတှကေို မွငျကွလောကျပွီပေါ့နျော။ Stella ကတော့ ပွငျနဆေဲပါပဲ။ ယောငျးတို့လညျး အခြိနျမီပွငျဖို့ မမနေဲ့နျော…
Tagged clothing, Fashion, fashionista, girls, Mistakes, trend, women
နာမည်ကတော့ မြသစ်တည် ပါ။ Fashion နဲ့ Beauty ကို ဝါသနာပါလို့ For Her Myanmar မှာ ယောင်းယောင်းတို့အတွက် beauty hacks တွေ, fashion နဲ့ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ သုတရသစာပေတွေကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။
ဖိနပ်အပါးတွေက ပွဲမတိုးဘူးဆိုတဲ့အတွေးကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။
Posted on May 21, 2018 July 25, 2018 Author Hnin Ei Oo
ကဲ… ဘာကြည့်နာလဲ… ဖိနပ်အပါးလေးတွေ ပြေးဝယ်လိုက်တော့လေ…
Posted on January 23, 2017 Author Christina Rosy
ပုဝါတစ်ထည်ရှိရုံနဲ့ ပျိုမေတို့ကို လူတိုင်းက ငေးကြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ယုံပါသလား။ ဆောင်းတွင်းမှာလည်း ဖက်ရှင်ကျကျနေကြမယ်လေ။ ပုဝါလေးတစ်ထည်ဟာ လူတိုင်း ကိုယ့်ကို လည်ပြန်ငေးကြည့်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား။ ပုဝါတစ်ထည်လုံး ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ။ ခေါင်းမှာချည်လို့ရပါတယ်။ ရိုးရှင်းလှပပြီး သူများတွေပါ သဘောကျစေနိုင်လောက်တဲ့ ဖက်ရှင်တစ်မျိုးပေါ့။ လည်ပင်းမှာ ချည်ပါမယ်။ ဆွဲကြိုးဆွဲလို့အဆင်မပြေတော့ပေမယ့် ပုဝါလေးကြောင့် သူများထက် အလှတွေ လွန်ကဲနေမှာပါ။ ပခုံးမှာ ချည်ပါ။ အပေါ်ထပ်အင်္ကျီလေးတွေထက် ပိုမိုလှပတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ခါးမှာ ပြန်ချည်ပါ။ ဒီလိုပုံစံလေးဟာလည်း ကိုယ့်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့အသွင် ရစေမှာပါ။ ပုခုံးပေါ်ကနေ ရှေ့ကိုချပြီး ခါးပတ်ပတ်ပါ။ ဒီစတိုင်ကတော့ အလန်းဆုံးပဲ။ ကိုယ့်ကို မော်ဒယ်လို့တောင် ထင်သွားမယ်။ ခါးမှာစည်းလို့ရပါတယ်။ ကမ်းခြေသွားတဲ့အခါ အပေါ်က ထပ်စည်းတာ ဖြစ်စေ ဂျင်းဘောင်းဘီပေါ်က ထပ်စည်းတာ ဖြစ်စေ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ Verte (For Her Myanmar) […]
ဒီနှစ်ဆောင်းတွင်းမှာ လုံးဝအထာကျနေစေမယ့် ဆွယ်တာဖက်ရှင်(၅)မျိုး
Posted on October 24, 2017 Author Nandar
ဒီနှစ်ဆောင်းတွင်း အေးပါစေတော်…ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ လန်းရအောင်။
ယောင်းတို့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ဒီတစ်ပတ် Billboard မှာ ဟော့အဖြစ်ဆုံး သီချင်း (၁၀) ပုဒ်
ချစ်သူ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ဒီလို အားပေးပါ
အရမ်းဂါတဲ့ တနင်္လာမှာ ရုံးတက်ပျင်းနေသူများ ဖတ်သင့်သောစာ
Posted on March 22, 2019 March 22, 2019 Author Christina Rosy
မိဿရာသီဖွားတွေကို ချစ်မိနေပြီဆိုရင် သိထားရမယ့် အချက် (၇) ချက်
Posted on March 22, 2019 Author Mya Thitty
Posted on March 22, 2019 Author For Her Myanmar
Posted on March 22, 2019 March 22, 2019 Author Myat Moe